Kitra - "THB champions league" :: Nianaran’ireo mpifanandrina taminy namono baolina ny JSA Antalaha • AoRaha
Kitra – « THB champions league » Nianaran’ireo mpifanandrina taminy namono baolina ny JSA Antalaha
Tamin’ireo lalao telo vitan’ny Jeunesse Sportive Antalaha avy any Sava, tamin’ny fihodinana voalohany ho an’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Mada­ga­sikara, taranja baolina kitra, dia baolina telopolo no efa niditra tao amin’ny haraton’izy ireo. Baolina tokana, matin’izy ireo tamin’ny lalao nihaonany tamin’ny Tam Port Berger, nandritra ny andro voalohany, no hany mba tafiditr’ireo mpilalao tamin’ity fifaninanana ity, hatramin’ny omaly.
Taorian’ny efa nanda­voan’ny Tam Port Berger avy any Sofia (7 – 1) sy Fosa Juniors Elite Boeny (8 – 0) azy ireo dia nomontsanin’ny Ajesaia avy any Bongolava, tamin’ny isa 15 noho 0 ity solontenan’ny Ligin’i Sava ity, omaly, tao amin’ny kianja Rabemananjara Mahajanga. Efa nitarika tamin’ny alalan’ny isa 8 noho 0 ny solontenan’i Bongolava tamin’io lalao io.
Niakatra ho eo amin’ny laharana voalohany kosa ny ekipan’ny Fosa Juniors Elite, any Mahajanga, taorian’ ny nandresen’izy ireo ny Tam Port Berger, tamin’ny isa 2 noho 1. Tany Toamasina indray dia namonjy ny laharana voalohany vonjimaika (isa enina), saingy efa nahavita lalao telo, ny ekipan’ny Tia Kitra FC avy any Atsinanana. Omaly, dia niondrika teo anatrehan’izy ireo, tamin’ny isa 3 noho 1, ny ekipan’ny Voromaherin’Alaotra avy any Alaotra Mangoro.
Ny AS Adema, izay mbola hiatrika ny andro fahatelo rahampitso manoloana ny As Jet Mada Itasy, no mitana ny laharana faharoa (isa enina). Laharana fahatelo kosa ny solontenan’Itasy (isa efatra), taorian’ny nandresen’izy ireo ny Club M avy any Analanjirofo, tamin’ny isa 1 noho 0.
Nifoha tamin’ny torimasony kosa ny solontenan’ Analamanga faharoa, Cosfa, tany Toliara nandritra ny andro fahatelo. Resin’izy ireo tamin’ny alalaon’ny isa 4 noho 0 ny ekipan’ny VFM avy any Vatovavy Fitovinany, omaly, tao amin’ny kianjan’ Andaboly.
Nanamafy ny maha tompondakan’i Madagasikara azy kosa tany amin’ny kianjan’ Ampasambazaha Fiana­rantsoa ny Cnaps Sport Itasy. Resin’izy ireo, tamin’ny alalan’ny isa 2 noho 1, ny FC Vakinankaratra. Efa azo antoka izany ny hiatrehan’izy ireo ny fihodinana faharoa, saingy lalao goavana andrasan’ny maro ny fihaonan’ny Cnaps amin’ny Zanak’ala FC, amin’ny alahady ho avy izao.
Fanavaozana andrimpanjakana Ho valo ambin’ny folo sisa ireo loholona hiasa eny Anosikely
Baolina kitra – CAN 2019 Mino ny fiakaran’ny Barea amin’ ny ampahavalon-dalana i Nicolas Dupuis
Fikolokoloana tokontany Miranty etsy Andavamamba ireo fomba maro ho an’ny zaridaina
Olan’ny fitateram-bahoaka :: Hitoroka ny fihoaram-pefin’ireo mpitatitra ny mpandeha eny Ambohitrimanjaka
Fampisarahana fahefana :: Minisitra roa tsy maintsy hametra-pialana